Kedu ihe dị elu dị egwu n'oge mgbatị ahụ? - Azịza Kacha Mma
Isi > Azịza Kacha Mma > Max heart rate - azịza dị mfe maka ajụjụ
Kedu ihe dị elu dị egwu n'oge mgbatị ahụ?
Ọ bụrụ na gịobi obikarịrị 185na-akụkwa nkejin'oge mmega ahụ, ọ dị ize ndụ maka gị. Gị icheobi obimpaghara bụ nso nkeobi obina ị ga-achọ ma ọ bụrụ na ịchọrọ ị gbasie ike. A na-agụta ya dị ka pasent 60 ruo 80 nke kachasị elu gịobi obi.
Nwere ike ịbụ ezigbo aka iji tụọ ọsịsọ gị na ije gị, mana ọ dịtụla mgbe ị chere na mmụba nke obi nwere ike bụrụ oke ihe dị mkpa? Abụ m Anna na m Rick na anyị ga-eje ije gị site na iji obi ọnụego ka a bara uru ngwá ọrụ ma ọ bụrụ na otú? Ee, ọ bụrụ na nke ahụ pụtara ịchọpụta ihe mpaghara obi obi pụtara, ihe nke ọ bụla bụ, otu esi edozi ha yana otu esi etinye ihe a niile na mgbatị gị echegbula, anyị ekpuchila gị ma echefukwala mechie nche n'ihi na anyị enyochala etu ọnụọgụ ọnụọgụ obi nwere ike isi nye gị ihe mbido ịdọ aka ná ntị banyere ọrịa ma ọ bụ mwakpo, echefukwala ịdenye aha ma pịa akara mgbịrịgba ka e wee gwa gị mgbe anyị bulitere isiokwu ọhụrụ, iji nyere gị aka na-agba ọsọ ihe anyị na-eme kwa izu gịnị kpatara ọnya obi? Dị bara uru dị otú a maka ndị ọgba ọsọ, ọ bụrụ na ị na-eme ụdị mmega ahụ obi ọ bụla, ọ pụtara na ọnụọgụ obi gị na-abawanye nke mere na ọ bụ ezigbo ngosipụta nke otu esi sie ike. Mgbe ị na-agba ọsọ na ọnụọgụ obi dị iche iche, ha metụtara gị metụtara physiology gị n'ụzọ dị iche iche. Zụọ usoro dị iche iche wee gbanwee ụdị ọzụzụ ị na-achọ.
Mara mpaghara mpaghara ma ọ bụ mpaghara ị na-emega ahụ nwere ike inyere gị aka ịbawanye uru nke mgbatị gị ma ọ bụ mgbake gị. Mmetụta obi dị iche iche na-ezu ike na mgbe a na-emega ahụ, yana mpaghara obi dị iche iche dịgasị iche iche site na mmadụ na mmadụ, ọ dabere na ọtụtụ ihe dị iche iche agakọtara, gụnyere afọ, ibu, okike, ogo ahụike, ogo, na ọbụlagodi ihe ndị dịka ọgwụ ma ọ bụ nrụgide. Ihe ọzọ gbasara obi izu ike gị na ihe kpatara o ji dị mkpa iji nyochaa ya. May nwere ike ịchọpụta na obi gị na-agbanwe kwa ụbọchị yana site na ịgba ọsọ ka ọ na-agba Otu ụbọchị, ije ije nke ọ ga-adị mfe ọ nwere ike ịdị na-esikwu ike ụbọchị ọzọ.
Nke a nwere ike ịbụ n'ihi ọtụtụ ihe dị iche iche. Ma eleghị anya, ị rahụghị ụra nke ọma n'abalị ahụ, ị ​​nwere ike ịhapụ ntakịrị ma chee obere ihe nhụjuanya na nrụgide nwekwara ike e Kedu nke kpatara na ọ bara ezigbo uru ileba anya na obi gị mgbe ị na-agba ọsọ ndị a niile mgbanwe dị iche iche ị nwere ike ịnweghị. Ugbu a achọpụtara ya mgbe ọ dị maka ịtụ obi gị mgbe ị na-agba ọsọ, enwere ụzọ abụọ dị mkpa: nke mbụ bụ ihe mmetụta ngwa anya na nkwojiaka gị, yabụ na Garmin ị ga-ahụ ọkụ na-enwu gbaa na ala nke na-anọdụ na nkwojiaka gị na ọkụ nke ntụgharị dịgasị iche iche na-agbaji site na mmegharị nke ọbara n'okpuru akpụkpọ gị na ngwaọrụ gị wee kọwaa nke a n'ime data ọnụọgụ obi iji nye gị ọtụtụ iti kwa nkeji, ma ọ bụ bpm.
bụ avocados ọjọọ maka eriri afọ gị
Nhọrọ nke abụọ bụ eriri obi nke a na-eyi n'akụkụ anụ ahụ n'okpuru uwe ị na-eyi, otu a ga-esi atụ obi obi gị n'ụlọ ọgwụ ma ọ bụrụ na ị nwere ọtụtụ nhọrọ. A na-etinye ya na akpụkpọ gị ka onye na-ezi ozi wee nọdụ n'ihu ma zipụ data ọ nakọtara na elekere ma ọ bụ ekwentị gị. Yabụ ọ bụrụ na ị na-eyi eriri akpati yana elekere, elekere ga-ewere data sitere na mgbaaka na-akpaghị aka site na ihe mmetụta dị na nkwojiaka ị họọrọ. O nwere ike ịbụ na ọ dị mfe iyi elekere, yabụ na izi ezi nwere ike bụrụ ihe dị mkpa, yana teknụzụ kachasị ọhụrụ Iji ihe nlele anya na algọridim mara mma, ọ pụtara na nlele dabere n'ihe ize ndụ nwere ike zuru oke, mana n'ọnọdụ ụfọdụ enwere ike imetụta njirimara anụ ahụ nke onye ọrụ, dabara, ma ọ bụ ụdị ọrụ maka oke ziri ezi Jide n'aka na ị debere ihe mmetụta gị dị ọcha na mgbe niile yana na ị nwere ezigbo ntụpọ n'aka nkwojiaka gị.
Mara na ihe dị ka egbugbu na ụcha akpụkpọ nwere ike imetụta izi ezi nke ọgụgụ. Ọtụtụ ndị na-eme egwuregwu kachasị elu na-eji eriri obi iji hụ na data kachasị ziri ezi na nke kwekọrịtara na ha kwesịrị iji dabara adaba, nọrọ ebe ha chọrọ mmiri iji bulie akara eletriki, ọsụsọ ozugbo ị na-akwagharị, ma ọ bụ obere mmiri ma ọ bụ mmiri n'ihu gị bido. Mpaghara obi bụ ụzọ iji tụọ mmetụta ọzụzụ ị ga-enweta site na ọsọ gị, yabụ ụfọdụ ndị na-eji usoro mpaghara mpaghara atọ ma ọ nweghị ihe kpatara na ị nweghị ike iji ọtụtụ mpaghara anyị na-agabiga taa Mpaghara ise ị ga - ahụkarị na ikekwe kachasị ejiri na elele Allgarmin bụ ebe ị na - azụ ezigbo ọzụzụ.
Anyị ga-akọwa ihe mpaghara ọ bụla pụtara, mana nke mbụ anyị ga-agwa gị otu esi azụlite mgbatị gị. E nwere ọtụtụ nhọrọ dị iche iche, mana ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ha niile chọrọ ka ị mara ma ọ bụ zụọ ihe kachasị mma obi gị bụ, ugbu a ụzọ kachasị mfe ma dị mfe iji mee ya bụ site na iji ihe a na-akpọ usoro nkịta ọhịa ebe ị na-ewere nọmba 220 ma na-ewepụ afọ gị site na nke kachasị ugbu a, nke a abụghị n'ezie usoro kachasị dị ka ihe nwere ike ịbụ eziokwu nke otu afọ 30, dịka ọmụmaatụ, nwere ike ọ gaghị emetụta onye ọzọ, ọkachasị mgbe ị tụlere ihe ndị dị ka ogo nwoke na nwanyị izugbe mma. Iji maa atụ, enwere usoro abụọ ndị ọzọ nwere ike ị ga - eji dị ka ndị ọzọ ma ọ bụrụ na ị na - achọ ụzọ dị oke ọsọ iji nweta ọnụ ọgụgụ ahụ, mana ịchọrọ ịchọta ọnụ ọgụgụ ziri ezi maka oke obi gị dịka nke ahụ obi iji meziwanye ọsọ gị, ịkwesịrị ịtụle ihe a na-akpọ nnwale nrụgide n'ihi na ị ga-anwa ịbịaru nso oke obi gị dị ka o kwere mee. Ikwesighi ma ị gaghị anwale nke a ma ọ bụrụ na ịnwee ọnọdụ ahụike ma ọ bụ mmerụ ahụ Ọ bụrụ na ị na-eyiri elekere ma ọ bụ eriri obi gị maka oge siri ike, ị nwere ike ịchekwa onwe gị ihe mgbu nke ịnwale ule nrụgide wee nweta ọgụgụ obi kachasị elu site na nnọkọ ahụ n'ihi na ọ ga-abụ na ị nwere ohere karịa ụzọ dị nso na oke obi gị? Agbanyeghị, anyị ga - egosi gị otu esi eme nnwale nrụgide mgbe ị dị njikere ka ị nwee ike ibu ụzọ kpoo ahụ dị mfe iji wuo onwe gị ruo mgbatị kachasị n'ime minit 10 ruo 12 nke mgbalị siri ike, nke mere na ọ dị n'ịgba ọsọ Ọ nwere ike ịbụ kilomita 3 dum, ọ nwere ike ịbụ 800 mita ugboro abụọ, ma ọ bụ ọ nwere ike ịbụ nkeji oge abụọ na atọ nke mgbalị siri ike.
Ọ nwere ike ịmalite ihe dị ka nkeji ise site na njedebe nke mkpọda ogologo, jiri nwayọ na-abawanye ọsọ na-agbada n'okpuru, wee jiri ụkwụ na-agbada n'ụzọ zuru oke maka nkeji abụọ iji nyere gị aka inweta oke obi gị. Ọ ga - ekwe omume ịhazi mpaghara ise niile nwere ọnụ ọgụgụ ahụ dịka pasent nke oke obi gị, mana enwere otu ihe anyị ga - atụ aro ka ị hazie mpaghara gị ọbụlagodi ma nke ahụ na - ewe obi gị izu ike, ebe ahụ bụ ụzọ ole na ole ị ga - esi mee nke a site na iyi elekere gị ụbọchị ole ma ole ma nwee usoro dị mma nke a. nweta obi izu ike zuru ike na ya ma ọ bụ na ị nwere ike ịlele ihe mbụ obi gị na ụtụtụ ma jiri uru a Ugbu a ị nwere oke nke onwe gị ma zuru ike, ị nwere ike gbakọọ ọnọdụ obi gị, nke bụ ihe dị iche n'etiti ha abụọ, nke a bụ mpaghara obi gị bara uru ka ị zụọ ị nwere ike zụọ mpaghara gị otu m ga-esi zụọ gị m ga-egosi, yana Garmin Jikọọ ihe niile ị ga - eme bụ ịhọrọ HRR site na nkwụsị - ndepụta ndepụta ma tinye ụkpụrụ max na izu ike gị ka Mpaghara 1 dị n'etiti 50 na 60 pasent nke nchekwa obi gị ma ọ bụ ị nwere ike gbakọọ ndoputa gị site na iji Mbelata izu ike obi gị site na oke gị, wee gbakọọ pasent iri ise na iri isii nke ọnụ ọgụgụ ahụ.
Tinye nọmba ndị a na obi izu ike gị iji nweta obi ala na nke elu maka mpaghara 1 Mpaghara abụọ pasent iri asaa na asatọ maka mpaghara nkeji iri asatọ na iri itoolu maka mpaghara iri itoolu na anọ na otu narị ọbara ọbara ọbara maka zonefive n’ikpeazụ ma ọ bụrụ na ị nwere mmasị n’ezie na gị mpaghara ọnụego obi iji tụọ dịka o kwere mee, mgbe ahụ ọ ga-ekwe omume ịga ụlọ nyocha wee mee nyocha ndị a site na pimpric ọkachamara na ntị gị iji tụọ ọkwa lactate na ya, yana tụọ oxygen gị site na nkpuchi M na-ekwu, ọ ga-ekwe omume ịme nke a n'ụlọ nyocha, mana ị ga-akwụ ụgwọ maka ihe ùgwù ahụ, yabụ ugbu a ị mebere mpaghara gị, nke a bụ ngwangwa ngwa ngwa nke ihe mpaghara ọ bụla pụtara. Yabụ ọ bụrụ na ịnweghị ule Alab, naanị nyochaa obi gị kachasị na ule Astress, ma ọ bụ ma eleghị anya ị jiri otu n'ime usoro ndị ahụ site na mbụ n'isiokwu ahụ, wee nwaa ya ma jiri ihe atụ anyị maka mpaghara ọ bụla. nke ịchọpụta mbọ ị ga-enwe ike ikwu na etu iku ume gị siri sie ike, otu ị ga - esi chọọ ịgbanwe mpaghara gị ka ị na - aga Mpaghara Otu bụ mgbali dị mfe ka ọ wee nwee ahụ iru ala yana iku ume gị ga - adị mfe. Inwe mkparịta ụka na mbọ ị na-agba dị obere Mpaghara abụọ dị mfe ịga ije nke ekwesiri iji gbakee na mgbake gị ma ọ bụ mgbe ị na-ekpo ọkụ ma ọ bụ na-ajụ oyi ị ga-enwerịrị ike inwe mkparịta ụka zuru oke - ọ ga-adị ka mmadụ anọ ma ọ bụ ise Mpaghara Mkpagbu Iri nke Atọ bụ ihe na-eme ka ikuku na-agba ọsọ nke ị nwere ike ịbanye n'ime ogologo oge gị. naanị nwee ike iji ihe swer ajụjụ na a okwu ole na ole Mpaghara ise bụ nnọọ ike sothis bụ etiti oge na sprints gị ume bụ ihe siri ike mkparịta ụka agaghị ekwe omume. Ọ fọrọ nke nta ka ị chee oke ike gị maka ịgba ọsọ niile ị na - eme iji nweta obi obi ụfọdụ. ọnụego na-agabiga ma ọ bụ na-ada n'okpuru a ụfọdụ nso, nke a bụ n'ezie ezi na-enwe ike inyocha obi gị ọnụego mgbe na-agba ọsọ na-enweghị mgbe niile na-ele anya ala na-ele gị elekere.
Iji elekere gị na - enye gị ohere ịhazigharị ihuenyo gị iji mee ka ị mata mpaghara ị nọ na ya dabere na agba ka ị ghara icheta ọnụọgụ niile ugbu a anyị gwara gị na anyị nwere ọnụ ọgụgụ dị elu Yabụ lee, ọ bụrụ ị na-abịarute n'ọnụ ụzọ ma nwee ezigbo echiche banyere ụdị obi ị ga-atụ anya ya na ọnọdụ na ọnọdụ, mana ị ga-ahụ na ọ ga-adị elu nke ukwuu nwere ike bụrụ akara mmalite nke ọrịa ma ọ bụ ike ọgwụgwụ. bụrụ ezi echiche dị mma iji belata oge a na-atụ anya ya ọbụlagodi na ọ pụtara na ị na-agba ọsọ nwayọ na mgbe ị gosipụtara ma hụ onwe gị ka ị na-emegharia karịa ma ọ bụ obere mana ọ na-esiri ike ị nweta obi gị na mpaghara ị na-agbasi mbọ ike, nke a nwere ike bụrụ ihe ịrịba ama mbụ na ị nọ n'okpuru ihu igwe ma ọ bụ enwere ike ịmegharị ahụ, yabụ kacha mma kpọọ ya ụbọchị njem n'ụlọ ma zuo ike na-atụ anya na isiokwu a zara ajụjụ gị banyere obi r riri ahụ na otu o nwere ike isi nyere gị aka ịgba ọsọ, i nwere ajụjụ ọ bụla ka anyị mara na ihe n'okpuru ma ọ bụ ikekwe ị ga-amalite ile anya data data a mgbe ị mechara ọrụ gị, gwa anyị ma nwee olile anya na anyị ga-ahụ gị oge ọzọ ebe a na-agba ọsọ
Ndi 200 bu obi di elu?
Ọtụtụ oxygen na-agakwa akwara. Nke a pụtara naobi na-akụobere oge na nkeji ọ bụla karịa ka ọ ga-adị na ngwugwu. Otú ọ dị, onye na-eme egwuregwuobi obinwere ike gaa 180 bpm kaOgba 200bpm n'oge mmega ahụ. Na-ezu ikeobi ududị iche iche maka onye ọ bụla, gụnyere ndị na-eme egwuregwu.Abali 9, 2017
Ndi 190 bu ezigbo obi obi?
Iji gbakọọoke obi gi, wepu afọ gị site na 220. Dị ka ihe atụ, ọ bụrụ na ị dị afọ 30,oke obi giga-abụ190. Buru n'uche, nke a bụ naanị ihe nduzi.Oke obi ginwere ike ịdị iche na 15 ruo 20 bpm na ụzọ ọ bụla.
Kedu ihe bụ ebumnuche kachasị nke ebumnuche?
Zube ọnụọgụ obiA na-egosiputa ya dị ka pasent (nke na-adịkarị n'etiti pasent 50 na 85 pasent) nke gịkachasịnchebeobi obi. Iheọnụego kachasịdabere na afọ gị, dị ka e wepụtara site na 220. Ya mere maka afọ 50,oke obibụ 220 mwepu 50, ma ọ bụ 170na-akụkwa nkeji.
Kedu ihe ga - eme ma ọ bụrụ na ị gafere oke ogo obi gị?
Me ihe karịrị 85% nkegị iche obi ọnụegonwere ike iwetagịnkwonkwo mgbu na akwara. Ọ na-etinyegịn'ihe ize ndụ maka ịmịnye ọtụtụ ọrụ, nke nwere ike ịkụda mmụọgịsite na mmega, nke kpam kpam na-adịghị arụpụta ihe.
180 bpm dị oke elu?
Iheobi obinwere ike ịdị kaeluDị ka 250gbagwojuru kwa nkeji, ma na-adịkarị n'etiti 140 na180(obi otiti kwesiri ibu 60-100gbagwojuru kwa nkejina izu ike).Abụọ 13, 2020
Nchegbu ọ nwere ike ịkpata Sinustachycardia na-ekwesịghị ekwesị?
Sinus tachycardiabụ mgbe ahụ gị na-ezipụ akara eletrik iji mee ka obi gị daa ngwa ngwa. Mgbatị ahụ siri ike,nchegbu, ọgwụ ụfọdụ, ma ọ bụ ahụ́ ọkụnwere ikeebua ya. Mgbe ọ na-eme maka enweghị doro anyaihe kpatara, a na-akpọ yaezighi ezi sinus tachycardia(IST). Obi gị nwere ike ịmalite na obere ijegharị ma ọ bụ nrụgide.Abụọ 25, 2020
Ekwesịrị m inwe nchegbu ma ọ bụrụ na obi m karịrị 100?
Gịkwesịrịgaa hụ dọkịta gịọ bụrụnke giobi obibụ mgbe niilekarịrị 100 gbagwojurukwa nkeji ma ọ bụ n'okpuru 60na-akụkwa nkeji (ma ị bụghị onye egwuregwu).Ọnwa Ise 19, 2018
Kedu ihe a na-ewere dị ka oke obi dị egwu dị egwu?
Tachycardia na-ezo aka aobi obinke ahụ dị oke ọsọ. Otú nke ahụ si kọwaa pụrụ ịdabere n’afọ ndụ gị na ọnọdụ ahụ́ ike gị. N'ikwu okwu n'ozuzu, maka ndị okenye, aobi obinke ihe karịrị 100na-akụkwa nkeji (BPM) bụtụlerengwa ngwa.Ọnwa Ise 30, 2016
Ọ bụ na a usu nke 190 ọjọọ?
Mgbe ịhụ dọkịta
Shouldkwesiri ileta dọkịta gị ma ọ bụrụ na obi gị dị elu karịa 100 na-akụ kwa minit ma ọ bụ n'okpuru 60 na-agbanye kwa nkeji (na ị bụghị onye na-eme egwuregwu).Ọnwa Ise 19, 2018
Gịnị ka ị pụtara site na oke obi ọnụego?
Kọwapụta oke obi (HR max) dị mfe: ọ bụ ọnụọgụ kachasị elu kwa nkeji obi gị nwere ike ịpị n'okpuru nrụgide kachasị. Eterchọpụta oke obi gị, agbanyeghị, na-esitụ ike - mana enwela obi nkoropụ. Nke mbụ, ọ bụ ntakịrị nzụlite.
Kedu ihe bụ mkpụrụ obi kacha ruo afọ iri anọ?
Nke a bụ usoro ọhụrụ: 211 - (0.64) x age. Yabụ na 40 dị afọ, ọnụọgụ kachasị obi gị bụ 211 - (0.64) x 40 = 185 bpm Ọ bụ ezie na usoro ọhụrụ a kwesịrị ịbụ nke ziri ezi karị, ọ dị mkpa iburu n'uche na ọmụmụ ihe ahụ chọpụtara nnukwu mgbanwe dị iche iche nke obi n'ime afọ ọ bụla otu.
Gini ka okwesiri iburu afọ ndụ m?
Ebumnuche Obi Uche na Atụmatụ Oke Obi Oke. Maka mmega ahụ siri ike, ogo obi gị kwesiri ịdị n'etiti 64% na 76% 1, 2 nke oke obi gị. Nwere ike ịkọ atụmatụ obi gị kachasị elu dabere na afọ gị. Iji mee ka ọnụ ọgụgụ afọ gị kachasị metụta afọ ole, gbutuo afọ gị site na 220.